चन्द्रागिरीको आईपीओ (chandragiri IPO) अब सर्वसाधारणलाई, कति गर्ने आवेदन ?
ramkrishna January 1, 2021	chandragiri ipo
चन्द्रागिरी हिल्सले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको छ । सर्वसाधारणले पुस २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म भर्न सकिने जनाएको हो । यस अघि आयोजना क्षेत्रका प्रभावित एवं स्थानीयबासीका लागि यसअघि नै जारी भईसकेको सो सेयर अब सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुन लागेको हो ।
चन्द्रगिरीले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतले हुने १५ करोड ३४ लाख ९ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको १५ लाख ३४ हजार ९ सय १० कित्ता सेयर जारी गर्न लागेको हो । यसअघि स्थानीयबासीका लागि २ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिसकेको छ । सर्वसाधारण समूहका आवेदकले यो सेयर लक्की ड्र मार्फत् १० कित्ताको दरले प्राप्त गर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले प्रत्येक आवेदकले १० कित्ताको लागि आवेदन गर्दा प्रर्याप्त हुने अवस्था देखिन्छ । सो कम्पनीले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रुपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
Previous Previous post: मुखबाट गन्ध आउने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् मुखबाट गन्ध आउने कारण र समाधानका उपायहरु
Next Next post: भारतका एक सम्मानिय र हिरो होन्डा सेयरका लगानिकर्ता रामदियो अग्रवल (Raamdeo Agrawal)